बोटले विकी लेख लेख्छ - Semalt विशेषज्ञ
तपाईले सोच्नुहोला कि एक दिनमा १ articles,००० लेख लेख्नु वास्तविक हुँदैन, तर स्वीडेकर जोहान्सन भनेर चिनिने स्वीडेनका लागि यो सम्भव छ। इभान कोनोवालोभ, Semalt विज्ञ भन्छन् कि यस व्यक्तिले सफलतापूर्वक एक कम्प्युटर प्रोग्राम सिर्जना गरेको छ जसले लाखौं लेखहरू लेख्न सक्छ। उनले २.7 मिलियन भन्दा बढी विकिपेडिया लेख लेखेका थिए र विश्वलाई आश्चर्यजनक कार्यका साथ आश्चर्यचकित तुल्याए। वाल स्ट्रीट जर्नलका अनुसार जोहानसन विश्वको सबैभन्दा प्रख्यात लेखक बन्न पुगे र उनको योगदानले विकिपेडियाका 8..5 प्रतिशत लेख ओगटेका छन्।
कसरी बोटले असंख्य लेखहरू लेख्न सक्छ?
जोहानसनका अनुसार, उसको बोट प्रति दिन सयौंदेखि हजारौं विकिपेडिया लेख लेख्न सक्षम छ। उनी सिभिल इन्जिनियरि,, भाषाविज्ञान, अर्थशास्त्र, र भौतिक विज्ञानमा उन्नत डिग्रीको साथ एक विज्ञान शिक्षक छन्। जोहानसनले वाल स्ट्रीट जर्नललाई भने कि उसको बोटले बहुविध विश्वसनीय स्रोतहरूबाट सूचनालाई स्क्र्याप गर्दछ र सामग्री एकसाथ घुम्छ। प्राय: यस सफ्टवेयरले बीटल र पुतली जस्ता साना जनावरहरूको वर्गीकरणसँग सम्बन्धित लेखहरू समेट्छ। यसले फिलिपिन्सको साना शहर र गाउँहरूको कथा लेख्न पनि सक्षम छ।
जोहान्सनको बोटको नाम:
जोहान्सनको सृष्टिलाई Lsjbot भनिन्छ। यो विशिष्ट बोट पक्कै पनि मानव आँखाका लागि लेख लेख्नु होईन। उदाहरण को लागी, एसोसिएटेड प्रेसले घोषणा गर्‍यो कि यसले सयौं सामग्री टुक्राहरू लेख्न विशेष रोबोटहरू प्रयोग गर्दछ, र बिभिन्न समाचार वेबसाइटहरूले दैनिक आधारमा समाचार शीर्षकहरू लेख्न बोटहरू प्रयोग गर्दछन्। तिनीहरू मुख्यतया वित्त र खेल संग सम्बन्धित कथाहरू कभर। विकिपेडियामा, सबै आधा लेख बट्सको सहयोगमा सम्पादन गरिन्छन्। विकिपेडियाका केही दीर्घकालीन सम्पादकहरू खुशी छैनन् किनभने गैर-मानवले विभिन्न लेख लेखेका छन्। यद्यपि, जोहानसनले बोटलाई बचाउँछ र औंल्याउँछ कि यसले लेख्नुभएका लेखहरू सही छन् र मार्कसम्म छन्।
उदाहरणका लागि, लजबोटले फिलिपिन्सको बेसे सहरहरूको बारेमा कडा लेखहरू लेखेका थिए। जब टाइफुन योलान्डा त्यो गाउँमा हिर्कायो र मृत्युको कारण भयो, धेरै व्यक्तिहरू ठूला ठूला ठूला ठूला ठूलाहरू भेट्न सक्षम भए र धेरै संख्यामा पीडितहरूलाई बचाए।
Lsjbot ले कसरी काम गर्दछ?
लजबोटले लेखेका १० लाख लेखहरू सही र विन्दुमा छन्। यस बोटले विभिन्न स्रोतहरूबाट डाटा सlects्कलन गर्दछ र विकिपीडियामा फिट हुने ढाँचामा सूचनाहरू कम्पाइल गर्दछ। बोटले हालसम्म 45 454,००० भन्दा बढी लेखहरू सिर्जना गरेको छ, र ती मध्ये आधा स्वीडेन भाषामा छ। स्विडेनी विकिपेडिया समुदायले लेख निर्माण गर्ने बोटको बारेमा विभिन्न द्वन्द्वबाट पाठ सिकेछ तर जोहानसनको बोटको बारेमा बढी जान्न उत्सुक थियो। स्विडेनी विकिपेडिया सम्पादकले लेखहरु समीक्षा गरे र भने कि लजबोटले राम्रो काम गर्यो। यद्यपि उनले यस बोटलाई विवादास्पद विषयहरू लेख्न अनुमति दिएन किनकि लजबोटले मेकानिकल चीजहरू महसुस गर्न सकेन।
जोहानसनको भाँडाको आलोचना:
धेरै व्यक्तिहरूले जोहानसनको बोटेको आलोचना गरे जसमा जर्मन विकिपीडियाबाट अचिम रास्का पनि थिए। उनले वाक्य संरचनाको बारेमा गुनासो गरे र भने कि लजबोट लामो लेख लेख्न सक्षम छैनन्। यस बोटले बिभिन्न डाटासेटहरू प्रयोग गर्दछ तर केहि लेख्दा बिभिन्न प्रामाणिक स्रोतहरू छोड्दछ। आलोचना को उल्टो छ कि लेख को सबै बयान उचित सन्दर्भ समर्थन गर्दैन। यसको मतलव ल्सबोटले विकिपेडियामा धेरै सन्दर्भहरू थप्नु पर्ने थियो। यस बोटको साथ, लेखहरूको ठूलो संख्या सिर्जना गर्न यो सजिलो हुँदै गइरहेको छ। तर हामीलाई अझै पनि मानव सम्पादक र लेखकहरूको आवश्यक छ कि यी कुरा स्पष्ट पार्न मद्दत गर्न।